Guddoomiyaha Golaha Shacabku ma kala diri karaa Guddoonka Guddiyada Golaha? – Kalfadhi
December 26, 2018 December 26, 2018 Kalfadhi
Sida ku cad qodobka 58-aad ee Xeer Hoosaadka Golaha Shacabka, farqadihiisa 4-aad, 5-aad iyo 6-aad, Guddoonka Guddiyada Golaha Shacabka waxa uu xilkiisa ku weyn karaa inuu keeno is casilaad (istiqaalo) qoran, haddii uu dhinto ama uu sameeyo xil-gudasho la’aan joogto ah iyo inuu si joogto ah uga maqnaado kulamada Guddiga.
Marka ay dhacdo inuu Guddoonka Guddigu sameeyo xil-gudasho la’aan joogto ah ama uu si joogto ah uga maqnaado kulamada Guddiga iyo haddii uu istiqaaloodaba, waxa ay Xubnaha Guddigu arrinkaas ku wargelinayaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka, si ay u soo doortaan Guddoomiye cusub, sida ku qoran Xeer Hoosaadka Golaha Shacabka.
Maalin kadib, markii ay soo baxday 26-kii bishii hore inuu Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, Cabdiwali Ibraahim Muuddey, kala diray Guddiga Maaliyadda, waxa uu Xildhibaan Mahad Salaad, oo Guddigaas ka tirsan, la wadaagay Guddiga dhamaan shuruucda ku qoran Xeer Hoosaadka ee ay Guddiyada Goluhu ku dhisan yihiin.
Markaas waxa uu Xildhibaan Mahad diidanaa, sharci ahaan, in uu Guddoonka Golaha Shacabku kala diri karo Guddi Golaha Shacabka ka tirsan. “Xubnaha Guddiyada Golaha waxaa cod ku ansixiyey Golaha Shacabka, go’aan Gole Shacab ayaana lagu kala diri karaa” ayuu maalinkaas Mahad ku yiri qoraalka uu la wadaagay Guddigiisa.
Go’aanka maanta ka soo baxay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ma kala dirin Guddiga, wuxuuse beddelay Guddoonkii Guddiga, sida Guddoomiyaha, Kuxigeenkiisa iyo Xoghayaha, oo laga saaray Guddiga, iyada oo lagu soo kordhiyey Xubno kale, waxaana la amray in si deg deg ah ay u soo doortaan Guddoon cusub si ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga shaqeeyaan xiridda Miisaaniyadda 2018 iyo meel-marinta Miisaaniyadda 2019-ka.
Xildhibaanno si aan rasmi ahayn ula hadlay Kalfadhi waxay sheegeen in go’aanka Guddoomiyaha Golaha Shacabka uu yahay xal ee uusan ahayn sharci, “maadaama” bey yiraahdeen “khilaafka Guddigaas uu shaqa la’aan dhigay Golaha Shacabka. Waxaan wali hadlin Xubnaha laga saaray Guddiga iyo kuwa ay suurtagalka tahay iney go’aankaas liqi la’yihiin.
Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka oo wada ka-tala-gelinta dadka Hindisaha Xeerka Shirkadaha